May Nyane: မေတ္တာတေး….
အဲလို စာမျိုးတွေ အစ်မရေးတာ မဖတ်ရတာ ကြာပြီ။
I wanna cry after reading this post.
ဒီပို့စ်ကိုဖတ်ပြီး သမီး မျက်ရည်ကျမိတယ်
ဆရာမနီးပါး ထပ်တူတွေးမိခဲ့ပါတယ်။ သားအမိနှစ်ယောက်ပြန်ဆုံတဲ့နေ့တုန်းက သတင်းပုံတွေကြည့်ပြီး ၀မ်းသားဝမ်းနည်း မျက်ရည်ဝဲခဲ့ရတယ်။
ကောင်း လိုက် တာ၊ များ များ ရေး ပါ ဗျာ။
မရေးတာကြာပေမဲ့ ရေးတော့လည်း လာအားပေးကြတဲ့သူတွေကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ တကယ်တော့ ဒီစာကို ရေးဖို့ ညီမလေး အိန္ဒြာပေးတဲ့
"အမေနဲ့ တွေ့ချိန်မှာတော့ ကလေးတွေရဲ့ အဖေဖြစ်နေတဲ့ သားက အမေ့ရှေ့မှာတော့ ပီဘိသားတယောက်သာပါပဲ..။" ဆိုတဲ့ ဒီစိတ်ကူးလေးကနေ စခဲ့တာပါ...။
ရက်ရက်စက်စက်ကို ကောင်းတဲ့ ပို့စ်လေးပါပဲ အမရေ့..၊
ကျနော်လည်း အဲဒီလိုတွေ တခါတခါတွေးမိပြီး အမေနဲ့ သားကြားမှာ စိုးရိမ်ပူပန်ဖူးတယ်၊ ဒါပေမယ့် လေဆိပ်မှာ တွေ့လိုက်ရတဲ့ ပြန်လည်ဆုံစည်းမှုလေးက အဲဒီသံသယ တွေအားလုံးကို လွင့်စင်သွားစေပါတယ်၊
အဲဒီ အမေနဲ့သားကြားက မေတ္တာကို ခံစားရလွန်းလို့ ကျနော်တောင် ဓါတ်ပုံလေးတစ်ပုံ လုပ်ဖြစ်ခဲ့သေးတယ်။
(ခရီးထွက်စရာရှိတာမို့ အခုကတည်းက အမကို တခါတည်း နှုတ်ဆက်ပါတယ်.. Merry X'mas and Happy New Year!!!)
Toe Yee Yee said...